विन्टर सिक भनेको के हो ? यसबाट कसरी बच्ने ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २० पुष २०७३, बुधबार १४:५८ |
काठमाडौं । परिवर्र्तित मौसममा घुलमिल हुने बेलामा शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि न्यून हुन्छ । यही मौकामा शरीरमा विभिन्न भाइरस र ब्याक्टेरिया पनि आक्रमण गर्ने दाउमा हुन्छन् । त्यसैले चिसो बढे लगत्तै जाडो संग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल पुग्नेको संख्यामा वृद्धि भएकोले स्वास्थ्यको ख्याल गर्न चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।
कमजोर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताका कारण जाडोसँग सम्बन्धित विभिन्न रोगले आक्रमण गर्छ । केहि दिन यता चिसो बढे संगै शुक्रराज सरुवा रोग अस्पताल पुनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ । शरीरले तापक्रम वहन गर्न नसक्ने भएकाले जाडोमा अत्याधिक चिसो वा तातोमा स्थानमा नबस्न बिज्ञहरु बताउँछन् । एसीमा बसेर बाहिर निस्किदा शरीरले बाहिरको चिसो मौसमसँग घुलमिल गर्न नसक्ने भएकोले धेरै तापक्रममा नबस्न बिज्ञहरुको सुझाव छ ।
जाडोमा धेरैलाई जोर्नी दुख्ने समस्या हुन्छ अधिकांश मानिस यस समस्याबाट पीडित हुने गर्छन् । जोर्नी दुख्ने समस्याबाट बच्न पैतलालाई न्यानो बनाउनुपर्छ । एउटा बाक्लो लुगा लगाउन भन्दा पातला दुई वा सो भन्दा बढी कपडा लगाउनु उपयुक्त मानिन्छ । यसले जोर्नीलाई चिसो हुनबाट बचाउछ ।चिसोकै कारण धेरै मानिसलाई ह्यदघात हुने गर्छ । तापक्रममा आएको गिरावटले रक्तनली साँघुरिने र मुटुमा रगत पम्प गर्न गाह्रो हुने हुन्छ । यही जोखिमका कारण विज्ञहरुले मोटा र बृद्धबृद्धालाई यो मौसममा मर्निङ वाक गर्न सुझाब दिँदैनन् । दम निमोनिया खोकी कोल्ड डाइरिया जस्ता जाडोमा देखिने रोगहरुले ज्यानै जान सक्छ ।
खानेकुरामा विशेष बिचार पु¥याउनुपर्छ । शरीरमा चिसो र तातोको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । तातोपानी, चिया अथवा कफी खाएर चिसो पानी वा अन्य पेय पदार्थ खानुहुन्न । बाहिर निस्किदा जहिले पनि मास्क लगाउनु उचित मानिन्छ । कमजोर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताका कारण जाडोसँग सम्बन्धित विभिन्न रोगले आक्रमण गर्छ ।
प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो भएमा चिसोजन्य रोगको संक्रमणबाट मात्र बचाउँदैन । अन्य गम्भीर रोग निम्तिनबाट पनि बच्न सकिन्छ । राम्रो र स्वस्थ खानेकुरा खाएर प्रतिरोधात्मक क्षमता बृद्धि गर्न सकिन्छ । भिटामिन सीले प्रतिरोधात्मक क्षमता सशक्त बनाउँछ । भिटामिन सि क्याप्सुल मेडिकलमा किनेर सेवन गर्न सकिन्छ ।
Previousरातो फोन नम्बरको हल्ला चलाउने दुईजना पक्राउ
Nextमाधवकुमार नेपालले भने–प्रचण्ड पो आलाकाँचा हुन् देउवाजी चाहि के भाको ?
९ श्रावण २०७३, आईतवार ०६:४६
लागू औषध बेच्ने काठमाडौंका मेडिकल पसलहरु
४ जेष्ठ २०७३, मंगलवार १६:४५
आज सरस्वती पूजा (श्रीपञ्चमी)
२७ माघ २०७५, आईतवार ०३:२४